Ny kitendry Emoji vaovao ho an'ny iOS 8.3 | Vaovao IPhone
Kitendry iOS 8.3 Emoji vaovao
Vaovao IPad | | iOS 8, iPad
Ny fanavaozana vaovao izay natombok'i Apple andro vitsy lasa izay, iOS 8.3, ao anatin'ny lisitr'ireo fanovana goavana dia nahitana iray izay nantsoin'ny mpampiasa fa hisarika ny saina: ny keyboard vaovao Emoji. Ny fampidirana sary masina vaovao 300 dia nahatonga ny mpampiasa maro hirohotra hanavao ny fitaovany haingana, saingy rehefa vita izany dia hitan'izy ireo izany ho fanampin'ireto emoji vaovao ireto dia misy keyboard vaovao nohavaozina, miaraka amin'ny rafi-pitetezana hafa tanteraka, ary ao anatin'izany koa ny emojiis vaovao izay mbola tsy fantatr'izy ireo tanteraka. Asehonay aminao amin'ny alàlan'ny horonantsary ity fitendry vaovao ity ary hazavainay ny fomba fiasan'izy ireo hahitana ny fomba fitetezana azy io sy ny fomba hisafidianana ny emoji vaovao.
Mitohy ny fitetezana amin'ny keyboard vaovao. Ny horonan-taratasy mitohy dia ahafahantsika mivezivezy amin'ny emoji be dia be mandao ny fitetezana ireo kinova taloha tamin'ny alàlan'ny kiheba ary amin'ny fotoana iray ihany amin'ny alàlan'ny pejy ao anatin'ny takelaka tsirairay. Mety hahasadaikatra ihany izany amin'ny voalohany, saingy amin'ny fotoana fiofanana kely dia afaka miditra amin'ny emoji haingana kokoa sy mora kokoa ianao noho ny tamin'ny kinova taloha. Mazava ho azy fa manohy mitazona ny fahafaha-mandeha mivantana amin'ny sokajy iray izahay amin'ny alàlan'ny sary masina miseho eo ambanin'ny efijery.
Araka ny aseho amin'ny horonantsary, mba hahafahanao misafidy ireo sary masina vaovao miaraka amin'ny volon-kodiny, dia mila izany ianao tsindrio ary tazomy ny emoji mandra-pisehoan'ny mpifidy miaraka amin'ny karazany isan-karazany. Vantany vao misafidy ny iray amin'izy ireo isika dia hiseho ho toy ny toerana misy anao io, ary rehefa manohina fohy ny emoji isika dia ho ampiana mivantana nefa tsy mila misafidy azy intsony. Raha te hanova ny emoji default ianao dia mila mamerina fotsiny ny fizotry ny fifantenana amin'ny alàlan'ny fihazonana. Ary ilay emoji vaovao? Eny, vaovao izay lazaina vaovao fa vitsy. Ny iMac, Apple Watch ary iPhone 6 dia vaovao, saingy tsarovy fa mba hahitan'ny mpandray azy dia mila manana iPhone na iPad nohavaozina amin'ny iOS 8.3 na Mac amin'ny Yosemite 10.10.3 izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Ny kitendry iOS 8.3 Emoji vaovao
alicante_alex dia hoy izy:
Tsy sendra olona ve izany fa rehefa mandefa ny keyboard emoji ianao dia mila toerana betsaka kokoa noho ny keyboard IOS? Tsikaritro izany rehefa manoratra hafatra na zavatra ampiarahiko amin'ny klavier iray aho mba hahitako andalana lahatsoratra iray hafa noho ny an'ny hafa.
Valio i alicante_alex
Flo dia hoy izy:
Salama e! Manana iPhone 5s aho ary efa tokony ho 2 volana lasa izay afaka nametraka emoticons amin'ny rindrambaiko rehetra (Facebook, app Whats, Instagram). Miseho eo amin'ny fitendry izy ireo, fa rehefa manindry iray aho dia mikatona ny fampiharana. Efa nanandrana aho: mamafa ny app, instagram, sns ary mametraka azy ireo indray, fanavaozana ny rindrambaiko iphone, mamafa ny kitendry Emoji ary averiko fa tsy misy. Misy mahalala ny antony mety hitrangan'izany?
Valiny tamin'i Flo
Mazava ho azy fa tsy fahombiazan'ny lozisialy ao amin'ny fitaovanao satria tsy tokony hitranga izany. Na dia mety ho radika aza ny vahaolana dia haveriko tsy misy backup (satria raha apetrakao ny backup dia azonao averina izay mahatonga ny lesoka) ary hamaha anao tokoa izany.
Juan Bustillo Busalacchi dia hoy izy:
Toy izany koa no mitranga amiko. Nanomboka nianjera tampoka teo amin'ny ios7.0.1 niaraka tamin'ny jalibreak aho, nanatsara ny 9.1, namerina iPhone ary namerina ny fianjerana. Ny tsy hataoko dia ny fahaverezan'ny fampahalalana rehetra noho ny emotikona sasany, ny vahaolana arosonao dia ratsy noho ny olana
Valiny tamin'i Juan Bustillo Busalacchi
Ovay ny kisary fampirimana OS X
Inona no hatao raha very ny iPhone-ko?